Fampahalalam-baovao avy amin’ny olona no nahafantarana ny fisian’ireto dinamita ireto.
« Rehefa nahazo io vaovao io izahay dia nangataka alalana tamin’ny Fitsarana ahafahana misava ilay orinasa. Ny maraina no nalefa tany amin’ny tompon’andraikitra izay fangatahana izay ary tamin’ny 11 no nivoaka. Ny tolakandro no nanatanteraka ilay fisavana ny zandary, ka izay no nahitana ireo karazana dinamita ireo », hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, lehiben’ny Cirgn Antananarivo.
Efa ela no nipetraka tao amin’ity orinasa ity ireto karazana dinamita ireto, araka ny loharanom-baovao. Rehafa tsy nihodina intsony ity orinasan’ny Filoha teo aloha, Marc Ravalomanana ity dia mbola tafajanona tao avokoa ireo fitaovana maro. Ampiasaina amin’ny fanapoahana vato sy ny asa vaventy no ilaina ireto dinamita ireto.
« Araka ny lalana dia any amin’ny tobin’ny zandary na miaramila no tokony hitahirizana ireo zavatra mipoaka ireo rehefa tsy ampiasaina. Mba tsy hisian’ny loza no hanaovana izany.
Mikasika ny fisavana ilay orinasa indray dia azon’ny mpitandro ny filaminana natao tsara izany na tamin’ny firy ora na tamin’ny firy, satria fanohintohinana ny filaminana anatiny no vesatra miandry ireo izay tompon’andraikitra amin’ity tranga ity », hoy ihany ny jly Ravalomanana Richard.